Incwadi "Yenziwe ngu-Apple eCalifornia" isathengiswa | Ndisuka mac
Incwadi ethi "Yenziwe ngu-Apple eCalifornia" isathengiswa
Kwiintsuku ezimbalwa ukwenza unyaka okoko kwakhutshwa incwadi yokuqala kwimbali yeApple. UJonathan Ive uthathe isigqibo, emva kweminyaka eliqela esenza oko, ukuba akhuphe incwadi ngembeko kaSteve Jobs apho kuboniswe khona iimveliso ezithengiswayo ngu-Apple kwaye ezinye zazo ziyila into engazange yabonwa ngaphambili inxulumene nenkqubo yokuvelisa efanayo.
Ukufika kwale ncwadi kushiye abasebenzisi bengathethi abaye baphambana ukuyifumana kwaye kukuba akukho nto ibisaziwa ukuba bazokwazisa inani eliqingqiweyo leeyunithi okanye ukuba bezokufikelela kuluhlu lwamalaphu abapapashe kwinqaku ukusuka kumaphephandaba awaye I-Australia, i-France, i-Jamani, i-Hong Kong, i-Japan, i-Korea, i-Taiwan, i-United Kingdom ne-United States.
Kunyaka kamva le ncwadi isathengiswa ukuze ifikelele kubo bonke abayifunayo. Isathengiswa kwiinguqulelo zayo ezimbini, i-26 x 32,4 cm kwi-199,00 € kunye ne-33 x 41,3 cm kwi-299,00.
Incwadi inikezelwe kwimemori kaSteve Jobs, ndiveze ngelo xesha:
"Kwasekuqaleni uSteve wayekhuthazwa yinjongo yakhe enyanisekileyo yokwenza ilifa lobuntu, kwaye oku kuhlala kuyinto yethu elungileyo kunye nenjongo yethu njengoko sijonge kwikamva, utshilo uJony Ive, igosa eliyintloko loyilo lika-Apple.
“Le ngxelo ifuna ukuba yinto elula yokudibanisa ezinye zeemveliso esizenzileyo kule minyaka idlulileyo. Siyathemba ukuba izakunceda ekucaciseni ukuba zikhona kwaye kutheni zibakho, kwaye zisebenze njengesixhobo sabafundi bazo zonke iinkalo zoyilo. "
Iimveliso ezikule ncwadi sisiqhamo sentsebenziswano esondeleyo phakathi kwenani elikhulu lamaqela ahlukeneyo. Yonke imifanekiso engama-450 ithathiwe ngumfoti u-Andrew Zuckerman ngendlela engeyiyo ngabom., kwaye ubonakalise inkqubo yoyilo luka-Apple kunye neemveliso ezigqityiweyo.
Siyazi ukuba asiyoncwadi wonke umntu anokuyifuna, kodwa ukuba wazi umntu onokuba nomdla, sishiya ikhonkco kuba okwangoku kwiwebhusayithi yeApple ungaphambana ukuyifumana
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Incwadi ethi "Yenziwe ngu-Apple eCalifornia" isathengiswa
URoberto Tena sitsho
Ndingayifumana inomdla ngakumbi ngokubhala okuthile, ndichaza umfanekiso ngamnye kwaye ndicacisa iinkcukacha zokwenza imveliso.
Kuphela yimifanekiso ethi, ngamanye amaxesha, umntu angazi ukuba yintoni kanye kanye ayibonayo, ndiyifumana iyinto engekhoyo.
Phendula URoberto Tena
I-Apple ithathe isigqibo sokucima izibane zeVenkile yeApple eChicago ngenxa yokufuduka kweentaka